Luka 9 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Luka Asɛmpa 9:1-62
Ɔde asɛnka ho akwankyerɛ maa Dumien no (1-6)
Yesu nti, Herode adwene tu frae (7-9)
Yesu maa nnipa 5,000 aduan (10-17)
Petro kae sɛ Yesu ne Kristo no (18-20)
Yesu kaa ne wu ho asɛm (21, 22)
Nea ɛkyerɛ sɛ obi yɛ Yesu suani ampa (23-27)
Yesu ahosakra (28-36)
Ɔsaa abarimaa bi a honhommɔne wɔ no so yare (37-43a)
Yesu kaa ne wu ho asɛm bio (43b-45)
Asuafo no gyee akyinnye wɔ nea ɔyɛ wɔn mu ɔkɛse no ho (46-48)
Nea ɔnsɔre ntia yɛn no wɔ yɛn afã (49, 50)
Samariafo akuraa bi mufo annye Yesu (51-56)
Sɛnea yedi Yesu akyi (57-62)
9 Na ɔfrɛɛ Dumien no hyiae, na ɔmaa wɔn ahoɔden ne tumi a wɔde betu ahonhommɔne+ nyinaa, ɛne tumi a wɔde bɛsa yare.+ 2 Ɛnna ɔsomaa wɔn sɛ wɔnkɔka Onyankopɔn Ahenni ho asɛm na wɔnsa yare, 3 na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mommfa hwee nntu kwan no; mommfa poma anaa aduan kotoku, paanoo anaa sika;* mommfa ntaade+ abien nso. 4 Na baabiara a mobɛkɔ no, sɛ mokɔ ofi bi mu a, montena hɔ nkosi sɛ mubefi hɔ akɔ.+ 5 Na baabiara a nnipa annye mo no, sɛ morefi kurow no mu akɔ a, momporoporow mo nan ase mfuturu mma ɛnyɛ adanse ntia wɔn.”+ 6 Na wosiim kɔfaa asaase no so, na wɔkɔɔ akuraa biara ase. Na wɔkaa asɛmpa no, na wɔsaa nyarewa wɔ baabiara.+ 7 Na Herode* a ɔyɛ ɔmantam sodifo* no tee nneɛma a na ɛrekɔ so no nyinaa, na n’adwene tu frae, efisɛ na ebinom rekeka sɛ wɔanyan Yohane afi awufo mu,+ 8 na ebinom nso kae sɛ Elia na aba, ɛnna ebinom nso se tete adiyifo no mu baako na wasɔre.+ 9 Herode kae sɛ: “Matwa Yohane ti.+ Ɛnde hena na meretete ne ho asɛm sɛɛ yi?” Enti, na ɔpɛ sɛ ohu no.+ 10 Bere a asomafo no san bae no, wɔkaa nneɛma a wɔayɛ nyinaa kyerɛɛ Yesu.+ Enti ɔfaa wɔn ne wɔn kɔhyɛɛ baabi a atew ne ho, wɔ kurow bi a wɔfrɛ no Betsaida+ mu. 11 Nanso bere a nnipadɔm no hui no, wodii n’akyi. Na ogyee wɔn fɛw so, na ofii ase kaa Onyankopɔn Ahenni no ho asɛm kyerɛɛ wɔn, na ɔsaa wɔn a wohia ayaresa no yare.+ 12 Afei na ade resa. Ɛnna Dumien no bae bɛka kyerɛɛ no sɛ: “Gya nnipadɔm no kwan sɛnea ɛbɛyɛ a wobetumi akɔ nkuraa ne mfuw a atwa ahyia yi mu akɔpɛ dabere ne nneɛma a wobehia, efisɛ baabi a yɛwɔ yi atew ne ho.”+ 13 Nanso ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mo ara momma wɔn biribi nni.”+ Ɛnna wɔkae sɛ: “Yenni hwee sɛ paanoo anum ne mpataa abien. Gye sɛ ebia yɛn ankasa kɔtɔ aduan brɛ nnipa yi nyinaa.” 14 Nea ɛte ne sɛ, na nnipa a ɛwɔ hɔ no bɛyɛ mmarima 5,000. Nanso ɔka kyerɛɛ n’asuafo no sɛ: “Momma wɔntenatena ase akuwakuw; kuw biara mu nnipa nyɛ bɛyɛ 50.” 15 Na wɔyɛɛ saa maa wɔn nyinaa tenatenaa ase. 16 Ɛnna ɔfaa paanoo anum ne mpataa abien no, na ɔhwɛɛ soro, na ohyiraa so. Afei obubuu mu, na ofii ase de maa asuafo no sɛ wɔmfa nsisi nnipadɔm no anim. 17 Enti wɔn nyinaa didi mee, na bere a wɔsesaw nea ɛkaa ase no, wonyaa nkɛntɛn 12.+ 18 Akyiri yi, bere a ɔno nko ara rebɔ mpae no, asuafo no baa ne nkyɛn, na obisaa wɔn sɛ: “Nnipadɔm no se mene hena?”+ 19 Wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Ebinom se Yohane Suboni, ebinom se Elia, ɛnna ebinom nso se tete adiyifo no mu baako na wasɔre.”+ 20 Afei obisaa wɔn sɛ: “Na mo nso ɛ, muse meyɛ hena?” Petro buae sɛ: “Kristo a Onyankopɔn asoma no no.”+ 21 Na ɔkaa no denneennen kyerɛɛ wɔn sɛ wɔnnka nnkyerɛ obiara,+ 22 na ɔkae sɛ: “Ɛsɛ sɛ onipa Ba no hu amane pii, na mpanyimfo ne asɔfo mpanyin ne akyerɛwfo no po no, na wokum no,+ na da a ɛto so abiɛsa no wɔanyan no.”+ 23 Afei ɔtoaa so ka kyerɛɛ wɔn nyinaa sɛ: “Sɛ obi pɛ sɛ odi m’akyi a, ɛnsɛ sɛ ɔyɛ nea ɔno ara pɛ bio.+ Mmom ɔmfa n’asɛndua* da biara da na onni m’akyi daa.+ 24 Na obiara a ɔpɛ sɛ ɔkora ne nkwa* so no, ebefi ne nsa, na obiara a me nti ɔbɛhwere ne nkwa* no, ɔno na ne nsa bɛka.+ 25 Na sɛ onipa nya wiase nyinaa na ɔhwere ne nkwa* anaa ɔsɛe no a, mfaso bɛn paa na obenya?+ 26 Na obiara a ɔbɛma n’ani awu me ne me nsɛm ho no, ɔno nso, sɛ onipa Ba no ba ɔne n’Agya ne abɔfo kronkron no anuonyam mu a, ne ho bɛyɛ onipa Ba no aniwu.+ 27 Nokwarem mereka akyerɛ mo sɛ, wɔn a wogyina ha yi mu bi wɔ hɔ a, wɔrenka owu nhwɛ kosi sɛ wobehu Onyankopɔn Ahenni+ no.” 28 Ampa ara, bere a ɔkaa saa nsɛm yi akyi bɛyɛ nnawɔtwe no, ɔfaa Petro ne Yohane ne Yakobo kaa ne ho, na ɔforo kɔɔ bepɔw so kɔbɔɔ mpae.+ 29 Bere a ogu so rebɔ mpae no, n’anim sesae, na n’ataade yɛɛ hyɛnn te sɛ hann. 30 Na hwɛ! ná mmarima baanu, Mose ne Elia, ne no rekasa. 31 Mmarima baanu no de anuonyam na ɛbae, na wofii ase kaa ne nkɔe ho asɛm, nea na ɔbɛma aba mu wɔ Yerusalem no.+ 32 Ná nna wɔ Petro ne wɔn a wɔka ne ho no ani so. Bere a wɔn ani so tetew wɔn no, wohuu Yesu anuonyam+ ne mmarima baanu a wɔne no gyina hɔ no. 33 Na bere a Mose ne Elia regyaw Yesu hɔ akɔ no, Petro ka kyerɛɛ Yesu sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfo, eye sɛ yɛwɔ ha. Enti ma yensi ntamadan abiɛsa, wo de baako, Mose de baako, Elia nso de baako.” Petro de, na onnim nea ɔreka. 34 Na bere a ɔreka eyinom no, omununkum bi bae, na efii ase kataa wɔn so. Bere a omununkum no kataa wɔn so no, wosuroe. 35 Na nne bi+ fi omununkum no mu bae sɛ: “Oyi ne me Ba, nea mapaw no no.+ Muntie no.”+ 36 Na bere a nne no bae no, wohui sɛ aka Yesu nko ara. Na wɔyɛɛ komm, na wɔanka nea wohui yi mu biara ankyerɛ obiara wɔ saa nna no mu.+ 37 Ade kyee no, wofii bepɔw no so sianee, na nnipadɔm kɛse bi behyiaa no.+ 38 Na hwɛ! ɔbarima bi fi nnipa no mu teɛɛm sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfo, mesrɛ wo, hwɛ me babarima yi, efisɛ ɔyɛ me ba baako pɛ.+ 39 Na hwɛ! honhom bi ba no so, na ɔteɛm prɛko pɛ, na etwa no hwe fam ma osinsen, na n’ano po ahuru. Na sɛ epira no wie mpo a, ɛmpɛ sɛ efi no so. 40 Mesrɛɛ w’asuafo no sɛ wontu honhom no, nanso wɔantumi.” 41 Yesu kae sɛ: “O awo ntoatoaso+ abɔnefo* a munni gyidi, me ne mo ntena na minnya mo ho abotare nkosi da bɛn? Fa wo ba no bra ha.”+ 42 Na bere a abarimaa no rebɛn Yesu no, honhommɔne no ma otwa hwee fam, na osinsenee. Nanso Yesu kaa honhom fĩ no anim, na ɔsaa abarimaa no yare, na ɔsan de no maa ne papa. 43 Na Onyankopɔn ahoɔden kɛse a wohui no maa wɔn nyinaa ho dwiriw wɔn. Na nneɛma a na Yesu reyɛ nyinaa yɛɛ nkurɔfo no nyinaa nwonwa. Ɛnna ɔka kyerɛɛ n’asuafo no sɛ: 44 “Monwɛn mo aso ntie saa nsɛm yi na monkae, efisɛ wobeyi onipa Ba no ahyɛ nnipa nsa.”+ 45 Ná wɔnte n’asɛm no ase. Nokwasɛm ne sɛ, ná wɔde ahintaw wɔn sɛnea ɛbɛyɛ a wɔrente ase, na na wosuro sɛ wobebisa no asɛm a ɔkae no ho biribi. 46 Na akyinnye bi sɔree wɔn mu sɛ, hena na ɔyɛ ɔkɛse wɔ wɔn mu?+ 47 Bere a Yesu huu nea wɔredwen ho wɔ wɔn koma mu no, ɔfaa abofra kumaa bi de no gyinaa ne nkyɛn, 48 na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Obiara a obegye abofra kumaa yi me din mu no, na wagye me nso; na obiara a obegye me no, na wagye Nea ɔsomaa me no nso.+ Na nea ɔyɛ ne ho akumaa wɔ mo nyinaa mu no, ɔno na ɔyɛ ɔkɛse.”+ 49 Na Yohane ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfo, yehuu obi a ɔde wo din retu ahonhommɔne, na yɛyɛe sɛ yebesiw no kwan, efisɛ ɛnyɛ yɛne no na edi w’akyi.”+ 50 Nanso Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Monnyɛ sɛ mubesiw no kwan, efisɛ obiara a ɔnsɔre ntia mo no, na ɔwɔ mo afã.” 51 Bere a nna no rebɛn ama wɔafa no akɔ soro no,+ ɔde sii n’ani so denneennen sɛ ɔbɛkɔ Yerusalem. 52 Enti ɔsomaa nnipa dii n’anim. Na wosiim kɔɔ Samariafo akuraa bi ase sɛ wɔrekosiesie hɔ ama no. 53 Nanso wɔannye no,+ efisɛ na wasi n’adwene pi* sɛ ɔbɛkɔ Yerusalem. 54 Bere a asuafo baanu, Yakobo ne Yohane+ huu eyi no, wɔkae sɛ: “Awurade, wopɛ sɛ yɛka ma ogya fi soro bɛhyew wɔn ase anaa?”+ 55 Nanso ɔdan ne ho, na ɔkaa wɔn anim. 56 Ɛno nti, wɔkɔɔ akuraa foforo ase. 57 Bere a wɔnam kwan so rekɔ no, obi ka kyerɛɛ no sɛ: “Baabiara a wobɛkɔ no, medi w’akyi.” 58 Nanso Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Sakraman* wɔ abon, na ewim nnomaa wɔ mmerebuw, na onipa Ba no de, onni baabi a ɔde ne ti to.”+ 59 Na ɔka kyerɛɛ ɔfoforo sɛ: “Di m’akyi.” Ɔbarima no kae sɛ: “Awurade, ma me kwan ma minkosie me papa ansa.”+ 60 Na Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Ma awufo nsie wɔn awufo,+ na wo de, kɔ na kɔka Onyankopɔn Ahenni ho asɛm wɔ baabiara.”+ 61 Na obi foforo nso kae sɛ: “Awurade, medi w’akyi, nanso ma me kwan ma menkɔkra me fifo ansa.” 62 Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Obiara a ɔde ne nsa so dade a wɔde funtum asaase mu na ɔhwɛ nneɛma a ɛwɔ n’akyi+ no, ɔmfata sɛ ɔkɔ Onyankopɔn Ahenni mu.”+
^ Anaa “a wɔakyea; kɔntɔnkye.”
^ Nt., “ɔde n’ani akyerɛ.”